Kala Dhaqaaqa Kooxda Jwxo-shiil iyo is Biimaynta Jwxo-shiil, ee Kenya – Rasaasa News
Jul 8, 2010 ee Kenya, Kala Dhaqaaqa Kooxda Jwxo-shiil iyo is Biimaynta Jwxo-shiil
Warar dhab oo ay dad u dhuunduleelaa dhambaal noogu soo dhiibeen caarada, ayaa dharaarinaya in Jwxo-shiil uu is dhiibayo, dhabaha uu sii marayaan uu yahay dhulka Kenya.
Kooxada Jwxo-shiil, ee ay afartu ku amar ku taaglayso, ayey in dhawaydba eedi dhextiil oodana kala rogtay ka dib kolkii ay 2:0 kaga adkaaday hogaanka ONLF ee Eng. Salaxudiin Cabdiraxmaan.
Jwxo-shiil, ayaa kooxda in dhawayba ku duraamanayey in ay dhinacooda ka qaataan heshiisyada socda inta uusan waagu ku dhaaroorbin. Waxaa soo jeedinta Jwxo-shiil ka dhaga adaygay Mr Qaaxo, oo ah ninka ugu madax adag kooxda burburka ONLF-na kula taliyey Jwxo-shiil.
Wararka ayaa sheegaya in todabaadkii la soo dhafay ay kooxdu ku kulantay telconference, waxayna kooxda inteeda badan inta ka aamustay mooyee is tuseen, in ayna jirin wax u dhiman ayna lama huraantahay in la higsado wadada ay mareen Sheekha iyo Engineerku. Arintaas waxaa gaashaanka ku dhuftay Maxamed Ismaciil, waxaana lagu yidhi adiga lee waaye.
Jwxo-shiil, ayaa sida la sheegay hoosta ka abaabushay rag muhiim u ah isaga oo ay ka mid yihiin, Cabdi Cabdulahi oo uu abti u yahay iyo Sulub Cabdi Axmed oo uu Adeer u yahay, labadaas nin mid wuxuu joogaa Kenya midna Hargeysa. Waxaa nimankan iyo Jwxo-shiil, warka u kala qaada, dhinacna kaga xidhan saraakiil Itobiyan ah Cabdala Af Waranle oo Dubai jooga ahna ninkii Dr. Dolal shirqoolay.
Itobiya, ayaa waxay u xilsaaratay Ina Afwaranle oo todobaadkii hore tagay Addis Ababa, kol dhawna Dubai uu ka soo laabtay. Waxaa laga sheegay in uu yidhi Jwxo-shiil, wuxuu goor dhaw tagi doono Nairobi, Kenya, halkaas oo sida la sheegay ay isaga iyo Riyaale Xaamud oo ay eegga isku fikir yihiin ay iskala jaanqaadidoonaan. Riyaale Xaamuud oo la filayey in uu raaco waftigii ONLF ee Addis Ababa tagay shalay, ayaa waxaa uu u hakaday codsi kaga yimid Jwxo-shiil, si ay isula galbadaan.
Waxaa la filayaa in Jwxo-shiil, uu sii uruursandoono dhalinyaradii ka soo carartay gudaha ee isaga taageersanayd eeggana jooga Kenya. Waxaa aad carabka loogu hayaan in Jwxo-shiil iyo taageerayaashiisa oo beel u badan ay si beel ahaana u qaadan doonaa heshiis nabadeed.
Kooxda Jwxo-shiil, inta soo hadhay ayaa ruuxba reer yahay oo aan iyagu beel ahaan isu abaabuli karin balse la filayaa in ay halkooda ku shiiqidoonaan.
Waxaa aad looga cabsi qabaa in ay dhibaato ka gaadho Jwxo-shiil, hadii uu gaadho Kenya, madaama ay aad u joogaan dad badan oo uu dambi ka galay, waxaa kale oo uusan damaanaqaada nabadeed ka heli karin dawlada Itobiya madaama uu galay dambiyo shakhsiyeed.